Ntuziaka zuru oke na Youtube Shorts - AudienceGain Ltd
Ntuziaka zuru oke na Youtube Shorts
Y’oburu na ohuru ohuru Ihe nkiri YouTube, I nwere ike chọrọ inyocha anyị zuru ezu ndu ha ebe a - zuru ezu na a nkọwa zuru ezu na Atụmatụ maka optimizing Shorts vidiyo ịga nke ọma.
Fọdụ na-ekwu na nnukwu ewu ewu nke TikTok bụ ihe kpatara ọmụmụ nke atụmatụ a na Youtube. Kemgbe afọ 2020, ọtụtụ ndị ọrụ amatala ụdị beta nke obere mkpirisi Youtube dị n'ime ibe ngwa ahụ.
Mana ka, ebe ọ bụ na emeghị gọọmentị Youtube mkpirisi, mana ozi gbasara ya pere mpe ma bụrụkwa amụma. N'agbanyeghị nke ahụ, taa isiokwu a ga-anwa ikpuchi ihe niile anyị maara banyere atụmatụ Youtube obere beta kacha ọhụrụ. Ka anyị tụgharịa!
Kedu ihe bụ Youtube Shorts?
May nwere ike ịchọpụtala na usoro ntanetị ọ bụla nwere ụdị akụkọ dị mkpirikpi. Ha na-eme ka ha nwee ike igwu egwu na mkpa anyị dị ngwa ma dịkwa mkpa maka ọdịnaya ngwa ngwa.
N'ihi ọnụ ala dị ọnụ ala na ịdị adị nke smartphones taa, yana nnukwu ọdịnaya iji lelee ịntanetị, yana ntakịrị oge ezumike, nhọrọ ndị ọrụ hasntanetị agbanweela.
Ugbu a, ha na-achọ ikiri vidiyo ndị dị mkpụmkpụ iji zipu ozi ahụ na sekọnd ole na ole, a ga-ahụkwa ha na ihuenyo ekwentị ha na ezigbo mma foto.
N'ịtụle nke a, Google n'oge na-adịbeghị anya wee jiri ụdị vidiyo dị mkpirikpi a na-akpọ Uwe YouTube. Enwere ike ịnweta ya site na gam akporo ma ọ bụ iPhone ọ bụrụhaala na mmadụ na-eji ngwa YouTube, wee banye na akaụntụ Google ha.
Nke a bụ otu Youtube si kọwaa okike Youtube mkpụmkpụ: "Kwa afọ anyị na-ahụ ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị mmadụ na-abịa YouTube, na-achọ imepụta, anyị chọrọ ime ka ọ dịrị ha mfe ime ya."
Ọ dị mma, yabụ na ọ bụghị maka ịrị elu TikTok ma ọlị. Ezi mara.
Ọ bụghị banyere TikTok ma ọlị…
Dị ka aha ahụ na-atụ aro, Youtube Shorts niile ga-agbadoro ọtọ ma na-erughị 60 sekọnd. Nke a bụ nkọwa kachasị dị mkpa ịchọrọ ịma ugbu a, mana anyị ga-alaghachi na nke a ma emechaa.
Ebumnuche dị n’azụ Youtube dị mkpirikpi bụ ịgba ume iji ngwa ngwa ebugharị site na ekwentị mkpanaaka yana ka ị ga-eleba anya na ha.
Dị ka ndị dị otú a, o yighị ka ị ga-ahụ YouTube Shorts na laptọọpụ gị, ebe ọ bụ na ezubere ha maka iji ekwentị.
YouTube Shorts dị ugbu a n'ụdị beta maka ndị ọrụ US na ndị India naanị.
N'agbanyeghị atụmatụ YouTube ịgbakwunye atụmatụ ndị ọzọ na ọnwa ndị na-abịanụ, ugbu a enweghị oge a kara aka maka mgbe Shorts ga-ebido ụwa niile ebe YouTube amachaghị oge mmepe na usoro nyocha ga-ewe.
Ihe Youtube dị mkpụmkpụ dị ka ya
A ga-eme ka ebe dị mkpirikpi na ngalaba nke ngwa mkpanaka YouTube. A gosipụtara nke a ugbu a maka ndị ọrụ gburugburu ụwa. Agbanyeghị, ebe ọ bụ na ha na-anwale etu Shorts ga-esi pụta na ibe, obere 'BETA' ga-apụta n'akụkụ aka nri aka nri nke aha Shorts.
Ozugbo ị banyere n'ime obere shelf, ị ga-ahụ nhọrọ nke obere vidiyo Youtube. Ntinye aka na ntinye aka ga-ewetara gị obere mkpirisi na YouTube na-eche na ị nwere ike ịmasị dabere na nyocha na lelee akụkọ ihe mere eme na ikpo okwu.
A-acha ọbara ọbara Idenye aha na-akpaghị aka na-agụnye niile nịịka. Dị ka ọ dị ugbu a, ọ na-egosi na akụkụ aka ekpe ala site na aha ọwa.
N’akụkụ aka nri nke ihuenyo ahụ, ị ​​ga-ahụ akara mkpịsị aka na mkpịsị aka ukwu, nkọwa, yana nhọrọ oke. Ọ bụrụ na ị pịa akara atọ, ị ga-ahụ menu mmapụta nwere nhọrọ iji lee nkọwa ahụ.
Agbanyeghị, cheta na nhọrọ ị hụrụ ebe a nwere ike ịgbanwe, ebe YouTube ka nọ na-anwale ule.
Etu esi eme ma bulite obere vidiyo Youtube?
Na-echegbu onwe gị na ịnweghị ike biputere obere mkpirisi Youtube ebe ị naghị ebi na India ma ọ bụ US na-enweghị nnweta beta?
Atụla egwu, vidiyo ị na-ebugo na YouTube ka nwere ike igosi na ndepụta nke ndị na-ekiri Shorts ma ọ bụrụhaala na ha soro isi akụkọ ole na ole a:
A ghaghị ịgbado vidio ndị ahụ n'ụzọ kwụ ọtọ
Ogologo oge 60 ma ọ bụ obere (ndị ọrụ YouTube kwadoro 15 sekọnd ma ọ bụ obere)
Gụnye hashtag #Shorts na aha ma ọ bụ nkọwa
Soro ntuziaka Community na-emebu site na Youtube.
Ugbu a na anyị ekpochala nchegbu ahụ n'ụzọ, ka anyị dọọ n'ime etu esi eme ya.
Otu esi emepụta YouTube Short Short
Ngwá ọrụ okike dị mkpirikpi dị ugbu a nke na-enye gị ohere ịme ụfọdụ edezi ma bulite Shorts ozugbo site na ekwentị gị site na ngwa YouTube dịịrị naanị ndị okike na US na India n'oge ahụ.
Mgbe Shorts dị, ndị okike ga-enwe ike ịmịpụta ha site na ịga na ihuenyo ụlọ ha, na ịpị akara ngosi "+" na igodo ala, na ịhọrọ "Mepụta Short" na menu egosiri. N'okpuru ebe a bụ nseta ihuenyo si YouTube.
Ngwa mkpanaka YouTube ga-enwe ngwa di na nwunye maka imepụta mkpụmkpụ, gụnyere ike:
Bulite tupu emee ọdịnaya site na mpịakọta igwefoto.
Me otu na igwefoto n'ihu ma ọ bụ n'ihu ihu.
Gbanwee ọsọ vidiyo.
Buru ụda maka ihe egwu egwu.
Record aka-free iji ngụda ngụ oge.
Ọ bụ ezie na nịịka nwere ike ịbụ ihe dị ka sekọnd 60, ọ bụrụ na ị na-achọ ịse otu n'ime ngwa, ogologo ogologo bụ sekọnd 15.
Agbanyeghị, enwere akụkọ na YouTube na-agbakwunye nke abụọ ma ọ bụ abụọ na vidiyo ị na-ebugo. Nke a nwere ike ọ gaghị adị ka nnukwu ihe maka vidiyo dị ogologo, mana sekọnd abụọ ọzọ nwere ike ịbụ ọdịiche dị n'etiti YouTube na-ekenye vidiyo gị dị ka obere ma ọ bụ vidiyo mgbe niile.
Iji kpọọ ya na nchekwa, Shorts gị ekwesịghị ịbụ 58 sekọnd. Nke ahụ ga - agba mbọ hụ na ị gafere njedebe 60-nke abụọ. Ọ bụ ezie na obere vidiyo dị mkpirikpi maka Shorts amaghị, anyị ga-akwado ịme nke gị ọbụlagodi 5 sekọnd.
Akụkụ dị mkpirikpi dịkwa mkpa. Site na nnwale dị iche iche, vidIQ chọpụtara na Shorts ga-abụrịrị akụkụ zuru oke (1080 x 1080 pikselụ) ma ọ bụ vetikal. Ọ bụrụ na vidiyo gị ọbụlagodi otu pikselị karịa ka ọ dị ogologo, YouTube agaghị ekewa ya dị ka Short.
N'ime ọnwa ndị na-abịanụ, YouTube na-achọ itinye nzacha, ederede ederede, na ike ịmepụta draịva.
Misfọdụ nghọtahie banyere Youtube Shorts
Echiche ndị na-ezighi ezi banyere Youtube Shorts
Enweghi obi abua n’etiti ndi okike na etu mkpirisi Youtube si aru oru n’agbanyeghi, ya mere, lee uzo ihe ato iji ghapu echiche ndi n’agha.
Nwere ike ịmepụta, dezie ma bulite Short site na iji ngwaọrụ ọ bụla. YouTube ga-amata nịịka ndị ejiri smartphone, DSLR, iPad, ma ọ bụ ngwaọrụ ọ bụla na-edekọ vidiyo na-amata. Mgbe ị dị njikere bulite, ama ma ọ bụ desktọọpụ kọmputa ga-ezu.
Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na i tinye #Shorts na aha ma ọ bụ nkọwa nke vidiyo gị. YouTube na-agba ya ume, mana ọ gaghị eme ka a mata vidiyo gị dị ka Short.
Don'tchọghị ihe ọ bụla gara aga echiche ma ọ bụ ndị debanyere aha iji mepụta YouTube Short. Enweghị ihe ndị kachasị mkpa iji mepụta vidiyo dị mkpirikpi.
Nkpirisi YouTube na Monetization
Mkpirisi Youtube na Monetization
Imaara, enwere uzo abuo iji lelee ihe ntanetiri YouTube? Kacha nkịtị bụ site na ịchọta ya na Akụkọ na Short Videos doro anya.
Wayzọ ọzọ bụ site na ịlele ya dị ka vidiyo YouTube mgbe niile. Nke ahụ bụ ihe na-eme mgbe ndị na-ekiri vidio na ibe ọwa, n'ime ihe nchọgharị, na ọtụtụ mpaghara ndị ọzọ n'elu ikpo okwu.
Maka ndị natara otu akụkụ nke ego ha na YouTube, Shorts dị mwute ikwu na ọ gaghị enyere aka ịbawanye ego ị na-enweta kwa ọnwa.
Dabere na peeji nkwado Google, Shorts agaghị enwe mgbasa ozi na ha, nke pụtara na ha agaghị ewepụta ego ọ bụla.
Nlere na oge elele sitere na vidio ndị a anaghị etinye aka na ntozu mmemme Mmemme YouTube, nke chọrọ “karịa 4,000 oge elekere ọha na eze dị mma n'ọnwa iri na abụọ gara aga. ”
N'ikwu ya, ọ bụrụ na ndị na-ekiri aha denye aha na ọwa gị n'ihi Shorts gị, a ga-agụ ndị debanyere aha ahụ maka ndị debanyere aha 1,000 dị mkpa iji ruo eru maka Mmemme Onye Mmekọ YouTube.
O kwere omume na, dị ka atụmatụ Shorts na-aga n'ihu na-apụ, ndị okike ga-enwe nhọrọ iji kpata vidiyo ndị a, n'agbanyeghị na n'oge a enweghị atụmatụ doro anya maka nke ahụ.
N'aka nke ọzọ, vidiyo YouTube mgbe niile nwere ike ịnwe mgbasa ozi, yabụ, na-eweta ego. Mana dị ka vidIQ si kwuo, ego a na-enweta bụ nke kacha mma, yana echiche 750,000 Youtube dị mkpụmkpụ na - eweta ihe na - erughị $ 4 ad ego!
Ihe kpatara obere ego a sitere na Youtube Shorts ma e jiri ya tụnyere vidiyo mgbe niile ka na-arụrịta ụka.
Na mmechi, otu onye na-ekiri ihe na-ekiri Youtube dị mkpirikpi na-ekpebi ma onye okike na-enweta ego ọ bụla ma ọ bụ na-ekiri oge na ya.
Ọ bụrụ na a na-ele ya na mpaghara nchọpụta Shorts, atụla anya ego ọ bụla. Ọ bụrụ na a na-ele ya site na ọkpụkpọ YouTube mgbe niile, na-atụ anya obere ego nke mgbasa ozi mgbasa ozi (ma ọ bụ ụfọdụ oge nche maka ndị na-achọ nnabata Mmemme Youtube).
Nchịkọta YouTube ọ bara uru?
Dabere na isi mmalite dị iche iche ruo ugbu a, Youtube yiri ka ọ na-akwalite Shorts maka ugbu a.
N'ihi nke ahụ, Shorts na-enye gị ezigbo mmesapụ aka na ikpo okwu, yana obere mgbalị achọrọ karịa ịmepụta ọdịnaya ọdịnala, ogologo oge.
Creatmepụta na ibipụta vidiyo nke 60 nke abụọ were nkeji 15-20, karịa awa ndị nwere ike ịbanye na vidiyo YouTube dị ogologo.
Site na ọwa ọhụrụ, na-eche na ị ga-enweta ụfọdụ traction na ndị debanyere aha, ị nwere ike iji Shorts dị ka ikpo okwu iji gbasaa n'ime ọdịnaya dị ogologo karịa ka ndị debanyere aha gị ọhụrụ wee nwee ọ enjoyụ.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị na-achọ itinye ego na channelụ gị, ị nweghị ike ịdabere na Shorts naanị (cheta ihe anyị gwara gị na mbụ.)
Maka ọwa ndị dị ugbu a, Shorts dị ka echiche dị mma iji mee ka ndị na-ege gị ntị were obere vidiyo na-apụ apụ, mana mara na YouTube ewebebeghị ogologo oge site na nyocha oge site na Shorts, yabụ elele anya ọwa nke ọwa gị nwere ike were kụrụ.
Maka ugbu a, ịkwesịrị ilekwasị anya na uru nke Youtube Shorts - nke na-abụghị ego kama ọ bụ ụzọ isi mee ka ị mata ọwa gị. Y’oburu na ohuru na Youtube, ha nwere ike buru oke uzo iji guzobe onwe gi ma meputa uzo mbu.
YouTube Shorts bụ ụzọ dị ọhụụ iji lelee ma mepụta ọdịnaya vidiyo. Ọ nwere ike ijide ihu TikTok? Naanị oge ga-agwa. Ma ka ọ dị ugbu a, okporo ụzọ na echiche Youtube Shorts wetara dị mma ileghara anya.
Ihe akaebe na-egosi na ogo ọwa adịghị mkpa ma a bịa na Youtube Shorts. Ọ dị ka a ga - asị na ndị okike nwere ohere nha anya nke ịchọpụta vidiyo ha na shelf Shorts, nke bụ nnukwu uru ọbụlagodi ọwa obere.
Naanị ndị na-eme ọdịnaya sitere na India na US nwere ike dị oke njọ na njirimara a bara uru. Dịka, ọ bụrụ na ị na-achọ ụzọ nweta ndị debanyere aha Youtube ma lelee anya ngwa ngwa, AudienceGain bụ ebe a iji nyere aka.
Otu anyị nke ndị ọkachamara n’ahịa ịre ahịa ga-ahazi mkpọsa nkwalite maka ọwa Youtube gị n'ọtụtụ nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta, wee si na ị weta ọdịnaya gị na ọkwa sara mbara.
Otu onye debanyere aha na oge nlele ị nwetara n'aka ndị ahụ ga-abụ nke ezigbo ma ọ bụ nke ọma. Ihicha Youtube agaghị abụ nsogbu na njem gị na monetization!
Maka ama ndị ọzọ, biko kpọtụrụ Ndị na-ege ntị via:
Hotline / WhatsApp: (+84) 70 444 6666
Etu ị ga - esi mee ọkọlọtọ YouTube dị egwu 2021
YouTube bụ asọmpi asọmpi maka ụdị dị iche iche n'ụwa niile, na ọkọlọtọ YouTube bụ akụkụ dị mkpa nke ọ bụla YouTuber ga-a paya ntị na mgbe ...
Kwesịrị ndị na-emepụta ọdịnaya ịzụta ụmụazụ TikTok?
Tik Tok, usoro ikpo okwu vidiyo nke yiri nke YouTube, na-anata otutu ndi ntorobia n’ozuzu ya na ndi okike okike. Ya mere, ...
Ntuziaka A na Z na Youtube Netwọk Multi-Channel - Niile ị chọrọ ịma!
Ọ bụrụ na ị bụ obere onye okike ọdịnaya na Youtube, ị nwere ike ịnụ ma ọ bụ na ị gaghị anụ banyere okwu netwọkụ nwere ọtụtụ ọwa. Ruo ọtụtụ afọ, YouTube Multi-channel ...
Biputere na nso nso a
Esi zụta ụmụazụ Twitch? - Ntuziaka kachasị mma maka ndị mbido!
Akaụntụ TikTok Monetized
Service Monetized YouTube Channel ($ 500)
Oruru iji kpata ego ozugbo.
Channel àgwà na ịpụ iche na-ekwe nkwa.
Enweghị ikike nwebisiinka ma ọ bụ obodo ọ bụla.
A free Google Adsense Akaụntụ dakọtara na mba gị.
Nkwado na-agbanwe Google Adsense akaụntụ & niche nchebe.
Nkwado na nyochagharị akara 1 logo & ọkọlọtọ 1 n'efu.
Service Ozo Ozo Mgbasa ozi Mgbasa Ozi Facebook ($ 490)
Mpempe akwụkwọ ahụ enweghị usoro.
Akwa-mma & nnabata na iwu Facebook.
Ntuziaka ịkwụ ụgwọ ụgwọ
Service + 1 Akaụntụ Akaụntụ Ego ($ 470)
Nkwado isonyere mmemme Onye Okike.
Kwado nghazi mmepe akaụntụ bara uru na ogologo oge.